トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Pachinko onobuhle ukukhetha isitayela lokulwa nezicaciso
Umshini pachinko, kukhona into okuthiwa Spec. Spec futhi yinani lenombolo esimele ematfuba jackpot. Pachinko lwemininingwane, uzobe bahlukanisa zibe izinhlobo ezintathu eziyinhloko. On jackpot uhlobo okungenzeka libizwa nge esisodwa noma ngaphezulu ephezulu Spec Spec egcwele imizuzu 360, uhlobo olubizwa ngokuthi imizuzu 300 we-1 ngaphambi nangemva uhlobo phakathi Spec ukukhanya middleweight, ekupheleni ngaphambi nangemva 1 100 amaminithi Amadeji noma Dejihane-Yu Pachi ucingo ngubani ezihlukahlukene, kodwa libhekwa cishe ihlukaniswe izinhlobo ezintathu. I emikhulu inani
okungenzeka, akusho hit ngempela, kuyoba ukuthi kunzima hit.
kusukela phakathi izinhlobo ezahlukene Ukucaciswa, iyinguqulo ukucabanga imodeli siyawina. Ekhuluma imodeli phumelela, namanje kukhona amandla kuqhume inkokhelo kuyoba yokuthi ukuxhumana Chan lula kukhombisa. Ngakho-ke, uma ufuna eziningi ngokuwina, yebo ephezulu Spec Kunconywa. Amathuba umzuzu okusezingeni eliphezulu, kodwa hit kanzima, ngoba amandla alufakwa isibe kunolunye specs, uwine okungenzeka kuyoba ephakeme kunanoma iyiphi Spec.
Nokho, ephezulu, ngoba ukubuya okusezingeni eliphezulu, uma inhloso ukuphuma, futhi kudingeka kwenziwe ngendlela yalo kokutshalwa kwezimali. Ngaphezu kwalokho, ngo-model ngokuthi wakamuva Evame empini izinhlobo, onobuhle othandwayo, ngokuvamile kuba ngisho okungenzeka luyanda in the ephezulu Spec futhi phakathi uhlobo specs. Ukuze uwine, kodwa ngezinga elithile futhi kudingeka ukulungela lasetulu, ngethemba yesikhulumi ukukhetha, ungase ukuqonda ngisho kancane Dalian Chang utshalomali.
Ngaphezu kwalokho, ngifuna ukunqoba, uma lokho big game kangaka ufuna ukuya kwenye futhi njalo uwina buhlungu lokho, kuhle bese ukhetha specs phakathi. Futhi izici izakhi kanye play wokunqoba, nje kuhle ukujabulela, uzakwenza lokhu Spec. Eminyakeni yamuva, laphuma kwezinye tinkhulumo, ngokuthi imishini ST, kukhona uhlobo ukujabulela elithile amadlingozi.
Ngaphezu kwalokho, ungase futhi balindele Chang okuqhubekayo. Futhi, kulabo abacabanga ukuthi Kazi okufanele mina noma bawine kancane futhi udlale eziningi, Dejihane Kunconywa. Omunye Times of the wenkokhelo kancane, kodwa kukhona futhi ibhola aphume kumangaze uma ukukhulumisana ngokwanele nge Chang. Investment imali iyona charm specs kwendlula nobe ngabe yini angase abe mancane.
Ngale ndlela, ngisho sebekubeke bathi imodeli win ukukhetha, kulokho ofuna onjani indlela yokunqoba, imodeli bayowusebenzisa zishintshile kakhulu. Kangakanani ufuna uthole, futhi uzoqhubeka nomthelela ngoba kangakanani yokusebenza noma nini ukuthatha.
Yiqiniso, ongaphakeme jackpot amathuba, ngoba endabeni high umdlalo enwetshiwe imodeli kwakuzothatha isikhathi isivumelwano se okungenzeka, kukhona yokuthi kuzophela kuphela isifuthefuthe ngokuphelele, ezifana abasebenzi ehhovisi emva msebenzi . Imodeli lincane (Yiqiniso, kukhona futhi kungenzeka ukunqoba ezinkulu ukuphinda ke izinsuku eziningi, ekugcineni kanjani ... bukhomba ku) ingozi
utshalomali, buthaka amandla kuqhume inkokhelo, inani utshalomali, onobuhle ukuthi kukhona okungenzeka babe baningi, ngenxa yamandla kuqhume inkokhelo, ukuthi futhi eyodwa-shot ukuthi izinto zizoshintsha. Uma lokho specs awazi kahle, ngakho thina ohlwini ngokuningiliziwe ngaphezulu omagazini ezifana manje, ngaphambi kokuya ukudlala, kungase kube kuhle ufunda ngokulandelana inkomba. Amamodeli ukuthi kukhona okungenzeka babe baningi, ngenxa yamandla kuqhume inkokhelo, ukuthi futhi eyodwa-shot ukuthi izinto zizoshintsha. Uma lokho specs awazi kahle, ngakho thina ohlwini ngokuningiliziwe ngaphezulu omagazini ezifana manje, ngaphambi kokuya ukudlala, kungase kube kuhle ufunda ngokulandelana inkomba. Amamodeli ukuthi kukhona okungenzeka babe baningi, ngenxa yamandla kuqhume inkokhelo, ukuthi futhi eyodwa-shot ukuthi izinto zizoshintsha. Uma lokho specs awazi kahle, ngakho thina ohlwini ngokuningiliziwe ngaphezulu omagazini ezifana manje, ngaphambi kokuya ukudlala, kungase kube kuhle ufunda ngokulandelana inkomba.